China Water Dabere nrapado N'ihi ike Hardwood Woodworking rụpụta na Factory | Akwa Ugbo
Water dabeere nyagide maka ike hardwood woodworking
Usoro: usoro SY6120
Ngwakọta agwakọta bụ 100: 15
Mbukota: 20 n'arọ / gbọmgbọm 1200 kg / plastic drum
Ngwa: eji na rụpụta akwa osisi dị elu dịka arịa ụlọ mahogany, akụrụngwa osisi ndị ọzọ, steepụ, wdg.
Ngwaahịa a bụ ezigbo mma gburugburu ebe obibi-emulsion nrapado na oke mma shiee na ike ọdụdọ, na ọsọ ọsọ gluing. Okwesiri maka ihe siri ike puru iche dika mahogany, sandalwood uhie, rosewood, dragon na sandalwood phoenix, pineapple grid, wdg. Mmiri mmiri dị elu na mmiri na-eme ka nrapado dị mfe iji ya na osisi. Nke a gluu bụ abụọ-akụrụngwa, mmiri-soluble nrapado maka elu-ọkwa osisi paneling. O nweghi ihe ojoo dika formaldehyde na phenol. Ọ dị mma, enweghị mmekọrịta gburugburu ebe obibi ma ghara imetọ gburugburu ebe obibi. Ọ nwere ezigbo ọrụ owuwu dịka ịrụ ọrụ na ịrụ ọrụ dị mfe, nhicha dị mfe, na oge pịa dị mkpirikpi. Ọrụ; ngwaahịa na-eji nrapado a nwere uru nke ike nrapado dị elu, nguzogide mmiri dị mma na nguzogide ịka nká. Osisi osisi siri ike gluu, dị ka OAK, Fraxinus mandshurica, maple, birch, osisi roba, osisi lotus, osisi dị iche iche Chere. Okwesiri ka odi nma maka nri na uzo di iche iche ma oburu ihe nkpo osisi. Ọ nwere ezigbo ọrụ ma na-ezute nguzogide mmiri nke klaasị na ụkpụrụ nguzogide ihu igwe nke Ministry of Agriculture and Forestry of Japan.
Mahogany bụ ngwongwo maka arịa dị elu ma dị oke ọnụ na mba m. Rosewood bụ osisi nke ezinụlọ legume, pterocarpus (pterocarpus) nke emere na mpaghara okpomọkụ. Na mbu ọ na-ezo aka na osisi uhie siri ike, nke nwere ọtụtụ ụdị; mgbe 1980s gasịrị, ọchịchọ ndị mmadụ maka mahogany na-abawanye, ụlọ ọrụ a chọrọ ka a hazie ya ngwa ngwa. Obodo a hazie mahogany dịka njupụta na ihe ngosi ndị ọzọ, a na-achịkwa mahogany dịka: alaka ụlọ ọrụ nke abụọ, usoro ọmụmụ ise, ụdị asatọ, na ụdị iri abụọ na itoolu. N'ihi uto ya nwayọ, ihe siri ike, na uto nke ihe karịrị ọtụtụ narị afọ, egbutusị ọtụtụ redwood ndị emere na mbụ mba ndịda m n'oge mbido usoro Ming na Qing. Taa, ọtụtụ osisi uhie na-emepụta na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia. N'Africa, Guangdong na Yunnan nke mba m akọpụtawo ihe ma webata ịkọ. N'ezie, agba nke osisi dị ka huanghuali, Burmese pear, na wenge agaghị acha ọbara ọbara. Woodkpụrụ osisi mara mma, ihe a siri ike ma sie ike, a na-eji ya maka arịa bara uru na nka na nka. Mahogany bụ osisi nke ezinụlọ Leguminosae na mpaghara ebe okpomọkụ, ọkachasị na India. Emekwara ya na Guangdong, Yunnan na South Sea Islands dị na mba m. Ọ bụ osisi dị oké ọnụ ahịa dị oké ọnụ ahịa. "Redwood" bu aha ama ama na Jiangsu, Zhejiang na north, ana akpo Guangdong dika "rosewood".
Mbido mbụ dị elu, ọ nwere ogo nke nkwụsi ike na esemokwu nke mpempe akwụkwọ nke emeela ka ọ nwee nrụgide.
Ihicha ngwa ngwa
Maka mahogany ụdị osisi osisi siri ike, ngwaahịa kachasị na ụlọ ọrụ ahụ bụ polyurethane gluu. Oge ịpị na-abụkarị karịa 8 awa, nke dị okpukpu abụọ karịa ọsọ ọsọ nke ngwaahịa ndị na-ama aka (agbanyeghị maka awa 3-4 iji belata nrụgide).
Ike njikọ dị elu
Ọ nwere ike ijikọ ụdị mahogany siri ike.
Obere ego n'otu oge ahụ
Ọnụ ego ahụ dị ala karịa ọtụtụ ngwaahịa dị n'ahịa n'okpuru otu ọnọdụ ahụ dị mma, na ogo nke otu ọkwa gluu dị elu karịa ọtụtụ ngwaahịa na ahịa.
Nzọụkwụ 01 Ewepụghị mkpụrụ bụ isi
Ewepụghị ọkọlọtọ: ± 0.1mm, mmiri ọdịnaya ọkọlọtọ: 8% -12%.
Nzọụkwụ 02 Ruru nke mama bụ oké egwu
Isi ihe na-acha ọcha (ọcha) na ịgwọ ọrịa (ọchịchịrị aja aja) agwakọta dị ka kwekọrọ ekwekọ ruru 100: 8 100: 10 100: 12 100: 15
Jiri onye na - ebido ihe iji bulie colloid ugboro ugboro 3-5, ọ nweghịkwa mmiri mmiri aja aja. Ekwesịrị iji ngwakọta agwakọta mee ihe n'ime 30-60 nkeji
Nzọụkwụ 04 Ngwa ngwa ngwa na gluu ngwa ngwa
Gluing ga-agwụ n'ime 1 nkeji, na mama kwesịrị edo na ọgwụgwụ mama kwesịrị zuru ezu.
Ekwesiri ịpinye osisi ahụ glued n'ime 1 nkeji, ma a ga-agbanye ya n'ime minit 3, oge ịpị bụ nkeji 45-120, na osisi ike ọzọ bụ awa 2-4.
Nzọụkwụ 06 Nrụgide ga-ezu
Nrụgide: nro 500-1000kg / m², hardwood 800-1500kg / m²
Igwe na-agwọ ọrịa dị elu karịa 20 ℃, nhazi ọkụ (hụrụ, planing) mgbe awa 24 gachara, yana nhazi miri emi mgbe awa 72 gachara. Zere ìhè anyanwụ na mmiri ozuzo n'oge a.
Nzọụkwụ 08 Ihe nhicha nke roba ga-adị uchu
Onye na-etinye gluu dị ọcha nwere ike hụ na gluu adịghị mfe igbochi, ma ọ bụghị na ọ ga-emetụta ọnụọgụ na ịdị n'otu nke gluu ahụ.
Nke gara aga: Water Based nrapado N'ihi Hardwood Woodworking
Water Dabere nrapado N'ihi Ọkara Hardwood Woodwo ...